कुन मानहरू ट्रम्पको लागि अनुकूल हुन सक्छ? | अर्थव्यवस्था वित्त
कुन मानहरू ट्रम्पको लागि अनुकूल हुन सक्छ?
जनवरी मा शुरू, डोनाल्ड ट्रम्प वास्तवमा संयुक्त राज्य अमेरिका को नयाँ राष्ट्रपति हुनेछ। त्यहाँ धेरै अज्ञातहरू छन् जसलाई थाहा छ र ती मध्ये एक भनेको इक्विटीमा के हुन्छ भनेर उनको कार्यकालमा कम्तिमा चार वर्षसम्म विश्वको एक महान आर्थिक शक्तिको अगाडि हो। यो परिदृश्य अनुमान गर्न कुनै जादुई लाठी छैन। तर हो को रूप मा केही हाजिर गर्नुहोस् ट्रम्प युगको दौरान सबैभन्दा सकारात्मक मानहरू के हुन सक्छ भन्ने बारे सुराग।
अहिलेको लागि, वित्तीय बजारले दिएको स्वागत सकारात्मक छ, दुबै एटलान्टिकमा र अर्को पक्षमा। विशिष्ट, अमेरिकी शेयर बजार करिब २% ले सराहना गरेको छ मतदान पछिल्लो दिन। केही वित्तीय विश्लेषकहरूले दिएका विपरित। इक्विटीमा ठूला दुर्घटनाहरू हुनेछ भन्ने तथ्यलाई संकेत गर्दै। अन्तमा, यो त्यस्तो भएको छैन, र यो अझ माथिको ट्रेंडमा जारी रहन सक्छ जुन यसको मुख्य स्टक अनुक्रमणिकाले देखाउँदछ।
तपाईं ब्यागमा सुरक्षा गर्न सक्नुहुन्न र यो चलसँग कम। तर जे भए पनि तपाईले के जान्न चाहानुहुन्छ त्यस्ता क्षेत्रहरू जुन अन्य भन्दा बजारमा राम्रो गर्न बढी संवेदनशील हुन सक्छन्। यो तपाईं संग शेयर बजार मा लगानी औपचारिक कसरी गर्नुपर्छ बारे मा कुनै संकेत हुन सक्छ। ताकि यस तरिकाले, तपाईं एक सही लगानी रणनीति को विकास गर्न मुद्रीकरण बचत उत्तम संभव तरिकामा।
1 ट्रम्प: झोला प्राप्त गर्दै
2 अनुकूल सम्भावनाको साथ मान
3 इस्पात निर्माताहरूले अचम्म मान्न सक्छन्
4 पूर्वाधारमा लगानी
5 सायद बैंकिंग क्षेत्र पनि
ट्रम्प: झोला प्राप्त गर्दै
एउटा कुरा तपाईंले थाहा पाउनुपर्दछ कि संयुक्त राज्यमा राष्ट्रपति चुनेको पहिलो बर्षको इतिहास ऐतिहासिक रुपमा धेरै अनौंठो र जटिल छ। अचम्मको कुरा होइन, वित्तीय बजारहरू उनीहरूको नियुक्ति र उनीहरूको पहिलो आर्थिक उपायहरूको लागि पर्खिरहेका छन्। यस दृष्टिकोणबाट, तपाईंले ठुलो पुनर्मूल्यांकनहरू अपेक्षा गर्नुहुन्न, अघिल्लो अभ्यासमा उत्पन्न जस्तो। पक्कै पनि हुनेछैन।
के हुन सक्दछ कि अमेरिकी शेयर बजारको माथिल्लो जडत्व जारी छ। त्यो भन्नु हो, सराहना गर्न जारी राख्नुहोस्। तर धेरै होशियार हुनुहोस्, किनकि यस भन्दा बढी भएपछि सबै समय उच्च यदि तिनीहरूको मूल्यहरुमा कडा सुधार छ भने यो कुनै पनि असामान्य हुने छैन। खतरा यो हो कि यसले चलन परिवर्तन गर्दछ। तेजीबाट बढ्नको लागि जाँदै। जुन अवस्थामा, तपाइँको लगानी सम्भावनाहरु धेरै नकरात्मक हुनेछ। तपाईसँग इक्विटी बजारबाट टाढा रहनको विकल्प छैन, सायद लामो समयको लागि।
जे भए पनि, हामीले स्टक बजारको अन्तिम प्रतिक्रिया के हो भनेर हेर्न ट्रम्पको पहिलो उपायहरूको लागि पर्खनु पर्नेछ। यो अत्यधिक परिवर्तनशील परिदृश्य हो जहाँ केही पनि हुन सक्छ। तपाईलाई सबै कुराको बारेमा सचेत हुनै पर्छ जुन तपाई खेलबाट बाहिर नपर्नुहोस्। यस परिदृश्यबाट, यो तपाईले छनौट गर्नु भन्दा बढी राम्रो हुन्छ अमेरिकी भन्दा पहिले अन्य इक्विटी बजार। तपाईको बचत सुरक्षित गर्नु बाहेक अरु कुनै उद्देश्य बिना।
अहिले अमेरिकी बजार स्थिरताको साथ खेल्दैन यो धेरै विशिष्ट र राजनीतिक चरमा आधारित छ। अबको शेयर बजारमा तिनीहरूको विकासको मूल्यमा तिनीहरूको उतारचढाव एक साधारण डिनोमिनेटर हुन सक्छ। तसर्थ, यदि तपाईं तिनीहरूको केही स्टकमा पोष्टहरू खोल्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईं अधिक सावधान हुनुपर्छ। सफलताको अधिक ग्यारेन्टीको साथ तपाईंको बचतको बचत गर्न।
अनुकूल सम्भावनाको साथ मान
विवादास्पद रिपब्लिकन राजनीतिज्ञको सत्तामा आउँदा इक्विटीका केही मूल्यमा बढ्दो अपेक्षाहरू उत्पन्न हुनेछ। तपाईले गर्नु पर्छ तिनीहरूलाई पत्ता लगाउनुहोस् ताकि तपाईं वित्तीय बजारमा तिनीहरूको कार्यबाट लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। यो एमा गठन गर्न सकिन्छ अवसर तपाईंलाई थाहा छ कसरी यस अवधिको लागि सबै भन्दा उपयुक्त लगानी मोडलहरू छनौट गर्ने। यो एक सकारात्मक तत्वहरू मध्ये एक हो जुन तपाईं यो नियुक्तिबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
यस प्रवृत्तिलाई कब्जा गर्न सक्ने क्षेत्रहरू मध्ये एक एक जुन धेरै नजिकबाट सम्बन्धित छ रक्षा खर्च सामन्यतया। यसको मूल्यांकनको लागि सम्भावना अन्य शेयर बजार प्रस्तावहरू भन्दा धेरै रोचक हुन सक्छ। त्यहाँ केवल एक सानो असुविधा हुनेछ र यदि तपाइँ संयुक्त राज्यको इक्विटीमा जानुपर्नेछ यदि तपाईं यी सुविधाहरूको साथ कम्पनीहरूको एक विस्तृत श्रृंखला चाहानुहुन्छ भने। युरोपियन बजारमा लागू गरिएको भन्दा केही अधिक विस्तृत आयोगहरू मार्फत।
अब देखि बाँकी भन्दा राम्रो गर्न सक्ने अर्को व्यवसाय क्षेत्र हो औषधि। कारण यो हो कि तपाइँ नयाँ राष्ट्रपतिको प्रोग्राममा रहेको महत्वपूर्ण कर प्रोत्साहनहरूमा भर पर्न सक्नुहुन्छ। जुन अवस्थामा, यो आश्चर्यजनक हुने छैन - यदि यो पूरा भयो भने - कि उनीहरूले बचतको अभिवादन गर्न महत्वपूर्ण उकालो चालहरू उठाए जुन यस कम्पनीको व्यवसायसँग सम्बन्धित छ।
इस्पात निर्माताहरूले अचम्म मान्न सक्छन्
तर यदि त्यहाँ एक क्षेत्र छ कि डोनाल्ड ट्रम्प को आगमन बाट फाइदा उठाए, कि यो बाहेक अरू कुनै छैन इस्पातसँग जोडिएका कम्पनीहरू। यस समयमा यो स्पष्ट खरीद शर्त हो। वास्तवमा, तीमध्ये केही सबै वित्तीय बजारमा विशेष बलको साथ बढ्न थालेका छन्। चिनियाँ आयातमा उनीहरूले अवरोध खडा गर्ने सम्भाव्यता इस्पात निर्माताहरूले यस खुशीको लागि ट्रिगर बनाएको छ।
यस अवस्थामा तपाईसँग राष्ट्रिय इक्विटी बजारबाट पूर्ण गर्नका लागि एक धेरै सजिलो प्रस्ताव हुनेछ। यो को शेयर को खरीद माध्यम हो आर्सेलर जुन स्पेनिश बेन्चमार्क अनुक्रमणिका, आईबेक्स 35 10 मा सूचीबद्ध छ। जुन हालको उच्च मूल्याerv्कन गरिएको छ, यसको मूल्य उद्धरणमा कडा छूटको साथ। यो भागमा प्रति शेयर १० यूरोको नजिक जान सक्छ।
थप रूपमा, यो चक्रीय मानहरूको एक श्रृंखला हो जुन विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको समयमा सबै भन्दा राम्रो अभिव्यक्ति छ। धेरै राम्रो गर्दै यसको बाँकी प्रतिस्पर्धी भन्दा जे भए पनि मध्यम अवधिको लागि तपाईको लगानी पोर्टफोलियो विकास गर्नका लागि यो एक निश्चित प्रस्ताव हो। केही इस्पात कम्पनीहरूले आफ्ना सेयरधारकहरूलाई सानो लाभांश पनि वितरण गर्छन्। यद्यपि अत्यधिक उच्च मार्जिन होइन, र कुनै पनि अवस्थामा बीमा कम्पनीहरूले, बिजुली कम्पनीहरू वा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले प्रस्ताव गरेको%% भन्दा कम।
उनको चुनावी कार्यक्रमका अनुसार ट्रम्पको नीतिले अर्को महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ कि त्यो हो, उनको कार्यकालमा सबै किसिमका पूर्वाधारहरूमा अत्यन्तै बलियो लगानीको विकास हुनेछ। यो कम हुन सकेन, निर्माण कम्पनीहरू फेरि एक पटक यस आवेगका लाभार्थीहरू हुनेछन् अर्थतन्त्रलाई अझ बढी सक्रिय पार्ने। अचम्म मान्नुपर्दैन, व्यापारको मात्रामा भएको वृद्धिले यसको पहिलो प्रतिबिम्ब कुनै पनि देशका यी महत्वपूर्ण कम्पनीहरूको मूल्यहरूमा पर्नेछ।
यस परिदृश्यमा, स्पेनिश निर्माण कम्पनीहरू (ACS, OHL, Ferrovial वा FCC) नागरिक कामहरूको यस वर्गमा भन्नको लागि केहि हुन सक्छ। यो कुराको लागि कि यो आउँदो महिनाहरूमा उनीहरूको मूल्य बढाउनको लागि नयाँ ट्रिगर हुन सक्दछ। यो कुनै पनि शेयर बजार प्रस्ताव मा शेयर स्थिति को लागी तपाइँको संचालन को लागी केहि यूरो प्राप्त गर्न को लागी एक खराब लगानी रणनीति हुनेछ। राम्रो राष्ट्रिय वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट।
यस रणनीति को एक लाभ यो छ कि तपाईसँग धेरै व्यापार मोडेलहरू छनौट गर्न छन्। यसले कुनै एक खण्डमा तपाइँको निर्णयलाई समर्थन दिनेछ जुन एट्लान्टिकको अर्को तर्फ सार्वजनिक खर्चबाट चल्नेछ। अचम्म मान्नुपर्दैन, निर्माण कम्पनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाको व्यापार जीवनका अन्य क्षेत्रहरू भन्दा धेरै राम्रो गर्न सक्छन्। तपाईंले अर्को खाताबाट आफ्नो पोर्टफोलियो विकास गर्न पनि यो खातामा लिनुपर्दछ।
सायद बैंकिंग क्षेत्र पनि
यद्यपि यसले आफुलगायत धेरै साना र मध्यम लगानीकर्ताहरूलाई चकित पार्न सक्छ, बैंकि system प्रणाली यस राष्ट्रपति पदको चुनावमा निकै राम्रोसँग बाहिर आउन सक्छ। यस अवस्थामा, प्रेरणा राष्ट्रपति ट्रम्प हुन खोज्नु जानु पर्छ नियमको शर्तमा कम हस्तक्षेपकर्ता। यो क्रेडिट सुइसको एक रिपोर्ट द्वारा हाइलाइट गरिएको छ। उनीहरूको प्रमाण यो हो कि चुनावका नतीजाहरू थाहा पाएपछि वित्तीय संस्था सबैभन्दा बढी प्रशंसा गरिएको थियो। केहि धेरै विशिष्ट केसहरूमा, उनीहरूको मूल्यको तातोमा 5% को नजिक लेखाई प्रशंसा पुग्ने।
त्यस्तै प्रक्रिया भनेको जैव प्रौद्योगिकी कम्पनीहरूले विकास गर्न सक्दछ। अतिरिक्त प्रोत्साहनको साथ कि तिनीहरू वित्तीय बजारमा व्यापारको अन्य अधिक पारंपरिक लाइनहरू भन्दा बढ्न सक्दछन्। र कि तिनीहरू अधिक आक्रामक लगानीकर्ताहरूको कार्यहरूमा अधिक खुला रहन्छन्। उनीहरूको संचालनमा रणनीतिको रूपमा अनुमान पनि छ। छोटो र धेरै छिटो आन्दोलनहरूको माध्यमबाट जोसँग उनीहरूको सेयरको खरीदमा उच्च नाफा प्राप्त गर्न सक्दछन्,
यी क्षेत्रहरू बाहेक, शेयर बजारमा डोनाल्ड ट्रम्प प्रभावको फाइदा लिन विकल्पहरू खोज्न अझ गाह्रो छ। जे भए पनि, यसको लागि ठूलो जोखिमको साथ कार्यहरूको श्रृंखला आवश्यक पर्दछ र यसको अनुगमनबाट ठूलो रिसको आवश्यकता पर्दछ। यद्यपि तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ इनाम यसको लायक हुन सक्छ यदि तपाईंले यी विशेष कम्पनीहरू छान्नुभयो भने।
यदि तिनीहरूले केहि दिनहरूमा सामान्य भन्दा बढी अस्थिरता देखाएमा आश्चर्यजनक हुने छैन। संयुक्त राज्य अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपति को आर्थिक कार्यक्रम द्वारा प्रस्तावित धेरै शंका को समाधान नभएसम्म एक निश्चित प्रवृत्ति सेट नगरी। हुनसक्छ पनि तिनीहरूको उद्धरणहरूले तपाईंलाई बहकाउन सक्छ कुनै बिन्दुमा त्यसकारण, तपाईंको खरीद कार्यहरू धेरै सीमित मौद्रिक योगदानहरू अन्तर्गत औपचारिक हुनुपर्दछ। वा हुनसक्छ पूँजीलाई विनियोजन गरिएको अवस्थामा अझ बढी शक्तिशाली लगानीहरूको पूरकको रूपमा।
यी सबै भ्यारीएबलका साथ तपाईले अब देखि बाँच्नु पर्छ। कमसेकम यदि तपाईं वाल स्ट्रिट स्टक बजारमा जान लाग्नुभएको छ भने। उनीहरूको नतिजाको रूपमा, तपाइँको निर्णय धेरै विचारशील हुनु पर्छ। तर जहाँ नयाँ व्यवसायका अवसरहरू सँधै शेयर बजारमा देखा पर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » वित्तीय उत्पादनहरू » बोल्सा » कुन मानहरू ट्रम्पको लागि अनुकूल हुन सक्छ?
तपाईंको लगानी अधिक लचिलो बनाउन कुञ्जीहरू